Shiinaha Warshad maaskaro filter-is-nuugista iyo alaab-qeybiyeyaasha | Zhongxing
Maaskarada ka-hortagga shaandhada is-hor-marinta ayaa leh hawsha shaandhaynta waxyaalaha aan saliida lahayn sida boodhka, qiiqa, ceeryaanta iyo noolaha; waxaa lagu bixiyaa qaab aan nadiif ahayn. Caabbinta hawadu waxay ka yartahay 110Pa, waxtarka sifaynta waxyaalaha aan saliida lahayn waxay ka badan tahay 95%, iyo waxtarka sifaynta bakteeriyada ayaa ka badan 95%.
Badeecadani waxay ku habboon tahay is-xoqidda ilaalinta sifaynta waxyaalaha aan saliida lahayn sida boodhka, ceeryaanta aashitada, ceeryaanta rinjiga, sheybaarka iyo wixii la mid ah ee hawada ku jira.
Maaskarada ka-hortagga shaandhada is-xoqidda ayaa leh astaamaha soo socda:
1. Lakabka kore ee maaskarada waxaa laga sameeyaa waxyaabo aan sun ahayn oo polypropylene ah, taas oo inta badan ah biyo-diidaya dhar aan tolmo lahayn;
2. Lakabka gudaha ee maaskarada ayaa badanaa laga sameeyaa maaddada polypropylene aan sun ahayn, suufka hawada kulul ee loo yaqaan 'ES' iyo 'viscose' dhar aan tolnayn oo leh xirmo hawo leh;
3. Qalabka miiraha ee maaskarada ayaa korsada laba lakab oo ah dhar dhalaalaya oo dhalaalaya oo dhalaalaya oo si bilaa elektaroonig ah loola dhaqmay, iyo waxtarka sifaynta bakteeriyada oo gaadhaysa in ka badan 95%;
4. Qaybta sanka ee balaastigga ah ee ku jirta jidhka maaskarada ayaa lagu hagaajin karaa sida la doono inta hawshu socoto, waana mid ku habboon oo raaxo leh in la xidho;
5. Naqshadeynta saddexda-cabbir ee maaskarada ah, iska caabbinta neefsashada inta lagu jiro xirashada ayaa ka yar 110Pa, ma aha mid cufan;
6. Badeecadani waxay isticmaashaa tiknoolajiyada cidhiidhiga ah ee tiknoolajiyada iyo tiknoolajiyada alxanka ultrasonic si ay maaskaro u noqoto mid jilicsan, xoog leh oo qurux badan.
Maaskarada ka-hortagga is-hor-marinta ee is-xoqidda ayaa badanaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo dadka ku nool deegaannada ay hawadu wasakhaysay walxaha aan saliida lahayn sida boodhka, qiiqa, ceeryaanta iyo noolaha. Hababka ugu muhiimsan ee loo isticmaalo waa:
Magaca badeecada Maaskaro ilaalin ah shaandhada is-xoqidda
Model N9501 Nooca dhegaha / dhegaha N9501
Waxyaabaha polypropylene dhar aan tolmo lahayn, ES cudbi hawo kulul
Heerka sifeynta bakteeriyada Percent95 boqolkiiba
Heerka sifeynta ee walxaha aan saliida lahayn ≥95%
U hoggaansan lambarka caadiga ah GB 2626-2019
Faahfaahinta xirxirida Baakadaha bac-warqad-caag ah, 1 gabal halkii boorso
Shaqaynta Ka hortag walxaha aan saliida lahayn sida boodhka, qiiqa, ceeryaanta iyo noolaha
Hore: Maaskarada caafimaadka ee aan tolmo wanaagsan lahayn oo la tuuro
Xiga: 84 jeermis dile ah
Maaskaro Maaskaro Waji Caafimaad ah, Maaskaro ka hortagga fayraska, Suufka jeermiska looga dilaaco, Maaskarada Neefsashada, Suufka Caafimaadka, Suunka Kalkaalinta,